Fomba fisainana famolavolana: fampiharana ny hetsika Rose, Bud, Thorn amin'ny marketing | Martech Zone
Alarobia, Desambra 12, 2018 Alatsinainy Desambra 17, 2018 Douglas Karr
Nientanentana be ity herinandro ity satria niara-niasa tamin'ny mpanolo-tsaina orinasa sasany avy amin'ny Salesforce sy orinasa iray hafa aho hijery ny fomba hanatsarako ny seho paikady ho an'ny mpanjifany. Ny elanelana lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria misy antsika ankehitriny dia ny fananan'ny orinasa matetika ny teti-bola sy ny enti-manana, indraindray manana ny fitaovana, nefa matetika tsy manana paikady hamonoana drafitra famonoana mety.
Fampiharana iray izay nalehan'izy ireo teny an-dàlana ho any amin'ny mpanjifa rehetra dia ny hetsika fisainana endrika antsoina hoe "rose, bud, thorn". Ny fahatsoran'ny fampihetseham-batana sy ny lohahevitra izay ahalalana azy dia nahatonga azy io ho fomba iray matanjaka indrindra hamantarana ny banga amin'ny ezaka ataonao amin'ny varotra.
Fanamarihana miraikitra mena, manga, ary maitso
Rindrina na toerana fotsy fotsy
Mpanamora mitazona ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny
Olona 2 ka hatramin'ny 4 manan-danja izay mahatakatra ny fizotrany
Ohatra amin'ny fampiharana
Angamba ianao hampiditra teknolojia marketing vaovao hampivelatra dia mandeha ho azy ho an'ny mpanjifanao. Mety hijanona amin'ny hiaka ny tetikasa satria tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana ny drafitrao. Izany no ahafahan'ny raozy, tsimoka, tsilo mora ampiasaina.
Rose - Inona no miasa?
Atombohy amin'ny fanoratana izay miasa miaraka amin'ny fampiharana. Angamba ny fiofanana dia tena tsara na ny fanamorana ny fampiasana ny sehatra. Angamba manana loharanom-pahalalana tsara ao amin'ny ekipanao ianao na amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo manampy. Mety ho zavatra rehetra… soraty fotsiny izay mandeha.
Bud - Inona avy ireo fotoana mety?
Rehefa manomboka mandrotsaka ny olonao, ny fizotranao ary ny sehatra misy anao ianao dia hisy fotoana ambony hisondrotra. Angamba ny sehatra dia manolotra fahaiza-manao hafatra ara-tsosialy, doka, na fandefasana hafatra izay afaka manampy anao mikendry kokoa ny tanjonao amin'ny fantsona maro. Angamba misy fampidirana vitsivitsy azo ampidirina ao anaty saina ny artifisialy amin'ny ho avy. Mety ho inona izany!
Tsilo - Inona no tapaka?
Rehefa mamakafaka ny tetikasanao ianao dia mety hahita zavatra tsy hita, mahasosotra, na tsy mahomby. Angamba io ny fandaharam-potoana, na tsy manana angon-drakitra ampy handraisana fanapahan-kevitra ianao.
Raha mandany 30 ka hatramin'ny 45 minitra manome hery ny ekipanao handefa naoty ianao ary mieritreritra izay mety ho raozy, tsimoka na tsilo, dia mety ho tavela amina fanangonana naoty miraikitra eny rehetra eny ianao. Amin'ny alàlan'ny famoahana ny eritreritrao rehetra momba ireo naoty voarakitra loko sy fandaminana azy ireo dia ho hitanao ireo lohahevitra sasany nipoitra izay tsy hitanao teo aloha.
Ny dingana manaraka dia ny fanangonana ny naoty, antsoina ity dingana ity fanaovana saritany. Ampiasao ny fanasokajiana mba hanetsehana ireo naoty ary handaminana izany manomboka amin'ny raozy, tsimoka, tsilo amin'ny tena fizotrany. Raha toa ny ezaka ataonao amin'ny varotra dia azonao atao ny manisy tsanganana maromaro:
Discovery - ny fikarohana sy ny angon-drakitra ilaina handrafetana ny ezaka marketing.
Strategy - ny ezaka marketing.
fampiharana - ireo fitaovana sy enti-miasa ilaina amin'ny fananganana ny hetsika marketing.
famonoana - ireo loharano, tanjona ary fandrefesana ny hetsika.
Optimization - ny fomba hanatsarana ny fandraisana andraikitra amin'ny fotoana tena izy na amin'ny manaraka.
Rehefa mamindra ireo naotinao amin'ireo sokajy ireo ianao, dia hahita lohahevitra mahafinaritra sasany manomboka miha tanteraka. Angamba ho hitanao ny iray ho maitso kokoa… manampy anao hahita hoe aiza no misy ny sakana mba hahafahanao manapa-kevitra ny amin'ny fomba hanosehana azy io hahomby.
Ity dia fanatanjahan-tena tsotra ampiasaina amin'ny fisainana endrika. Ny fisainana endrika dia fampiharana malalaka kokoa izay matetika ampiharina amin'ny famolavolana ny traikefan'ny mpampiasa, saingy mivoatra amin'ny fanampiana ny orinasa hiatrika olana lehibe kokoa koa.
Misy dingana 5 amin'ny fisainana famolavolana - manasongadina, mamaritra, manome idealy, prototype ary fitsapana. Ny fitoviana misy amin'ireo sy ny dia mailaka mailaka Tsy lozam-pifamoivoizana aho!
Mamporisika anao aho handray lesona, hijery horonantsary vitsivitsy, na koa mividy boky momba ny Design Thinking, manova ny fomba fiasan'ny orinasa izany. Raha manana tolo-kevitra ianao dia avelao izy ireo haneho hevitra!
Tags: Activitykiborinydesign thinkinghevitra-barotrabarotra tetikanitsanganatsilo nipoitratetikatsilo
Playoff: Manampia Lapam-panentanana amin'ireo rafitra rehetra